Aquarelo, oo ah barnaamij xiiso leh oo loogu talagalay Mac inuu kula shaqeeyo midabbada | Waxaan ka socdaa mac
Runta ayaa ah in marar badan aan isweydiiyey, midabkee ayey ku isticmaali doonaan boggan? Waa maxay lambarka RGB ama HEX si uu ugu isticmaali karo meel kale? Waan ogahay in qalabka bog furayaasha shabakadaha kala duwan aan si fiican u ogaan karno midabka la isticmaalay waqtigaas. Laakiin, ka waran haddii aad rabto inaad ogaato noocyada kala duwan ee midabada ee u dhexeeya hal koodh iyo mid kale si aad u hubiso midkee ku habboon adiga? Aquarelo wuu ku caawin karaa.
Waxa ugu horreeya ee aan kuu sheegi doonno ayaa ah, haddii aadan inta badan ku shaqeyn midabbada maxaa yeelay waxaad tahay naqshadeeye ama xirfadle horumariyaha websaydhka ah, waxaa laga yaabaa inaadan rabin inaad bixiso 9,99 yuuro oo dalabkani ku kacayo. Hadda, haddii aad ka tirsan tahay kooxda koowaad, waxaa laga yaabaa inay xiiso leedahay inaad hesho macluumaadka saxda ah ee midab kasta: magac, lambarro ku jira 36 qaabab oo kala duwan iyo suurtagalnimada in looga faa'iideysto Taabashada Bar ee MacBook Pro.
Aquarelo waa codsi aad u nidaamsan. Waa run, ma ahan mid raqiis ah, laakiin waxaad leedahay demo oo aad ku tijaabin karto haddii aad xiiseyneyso bixinta ama in kale. Aquarelo waa codsi ilaa kii ugu dambeeyay, wuxuuna si buuxda ugu dhexeeyaa taabashada taabashada ee MacBook Pro, isagoo awood u leh inuu ku doorto taabasho fudud midabka la doonayo iyo inuu helo koodhka codkaas isla markaana si otomaatig ah loogu guuriyo boodhadhka si loogu isticmaalo a ururinta cusub.
Sidoo kale, sidaan kuu sheegnay, Aquarelo wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku raaxaysato midab dhammaystiran oo midab leh oo u dhexeeya laba midab oo aad doorato. Taasi waa in la yiraahdo, barnaamijku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad gasho magac, RGB ama koodh HEX ah, iyo kuwo kale, iyo arjiga si aad ugu soo celiso midabyo kala duwan oo dhameystiran labada cod inaad tilmaantay. Waxaa intaa dheer, waxaad noqon kartaa midka tilmaamaya inta midab ee aad rabto inaan ku tuso inta u dhexeysa furayaashaas aad soo gashay. Marka ay soo celiso natiijada, waad magacaabi kartaa iyaga oo sameysan kara palette-kaaga shaqada.
sidoo kale, Aquarelo waxay leedahay isdhexgal buuxa oo leh barnaamijyada sida Illustrator CC ama Photoshop CC, inaad awood u leedahay inaad si toos ah ugu dirto midabka la xushay si aad u bilowdo shaqada, iyo waliba inaad taageerto 46 astaamaha ICC.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Mac App Store » Aquarelo, oo ah barnaamij xiiso leh oo loogu talagalay Mac inuu kula shaqeeyo midabbada
Run ahaantii kani wuxuu ahaa macluumaadka aan raadinayay,
Aad baad ugu mahadsantahay wadaagidaada. Salaan!